प्लाज्मा थेरापी गरेका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
प्लाज्मा थेरापी गरेका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन?
कमला गुरुङ शुक्रबार, माघ २३, २०७७, ०७:४३:००
काठमाडौं- प्लाज्मा थेरापी, जसलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा एक प्रभावकारी विधि मानिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालले पनि क्लिनिकल ट्रायलका रुपमा कन्भाल्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी विधि अपनाएको छ।
विशेषगरी कोरोनाका गम्भीर खालका बिरामीलाई मात्र प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्ने गरिएको छ। संक्रमित भएर निको भएका व्यक्तिबाट झिकिएको रगतबाट प्लाज्मा बनाएर संक्रमित व्यक्तिलाई प्लाज्मा दिइने विधिलाई कन्भाल्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ।
नेपालमा पनि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको छ। सरकारले माघ १४ गते अभियान नै सञ्चालन गरेर पहिलो चरणको खोप लगाउँदैछ। तर प्लाज्मा थेरापी गरेका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन?
भाइरोलोजिस्ट डा लुना भट्ट भन्छिन्, ‘प्लाज्मा थेरापी गरेका व्यक्तिले तत्काल कोभिड खोप लगाउन मिल्दैन। तर ३/४ महिनाको अन्तरालमा भने लगाउन मिल्छ।’
प्लाज्मा थेरापी गरिरहेका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा इम्युन सिस्टमको कामले अवरोध गर्ने उनले बताइन्। यो अवस्थामा खोप लगाउँदा खोपले पनि काम नगर्ने उनले बताइन्। एन्टी भाइरल औषधि खाइरहेका बिरामीले भने खोप लगाउँदा फरक नपर्ने उनले बताइन्।
प्लाज्मा थेरापी र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सम्बन्धका बारेमा डा लुना भट्ट भन्छिन्–
कोरोनाका बिरामीलाई अहिले कन्भाल्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी दिने गरिएको छ। प्लाज्मा थेरापी गर्ने व्यक्तिले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ।
प्लाज्मा थेरापी उपचार भनेको शरीरमा एन्टिबडी दिइएको हो। यो अवस्थामा कोभिड खोप नलगाउनु भनिएको छ। किनभने यो बेलामा खोप लगाउँदा इम्युन सिस्टमले खोपलाई अवरोध गर्छ र काम गर्दैन पनि भनिन्छ। त्यसैले प्लाज्मा थेरापी गरेका व्यक्तिले तुरुन्त कोभिड खोप लगाउनु हुँदैन।
प्लाज्मा थेरापी गरेका व्यक्तिले खोप लगाउने हो भने निश्चित समयको अन्तराल हुनुपर्छ। प्लाज्मा थेरापी गरेको ३/४ महिना नै भइसकेको छ भने खोप लगाउन मिल्छ। तर थेरापी गरेको एक महिना मात्र भएको छ भने खोप लगाउन हुँदैन।
एन्टिभाइरल औषधि खाइरहेका बिरामीले भने खोप लगाउँदा फरक पर्दैन। मात्र प्लाज्मा थेरापी गराइरहेका र गरेका व्यक्तिले तत्काल खोप लगाउनु हुँदैन। लामो समयको अन्तर हुनै पर्छ।
कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा डा भुपेन्द्र बस्नेत ५५ मिनेट पहिले
स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने काठमाडौं प्रशासनको चेतावनी १ घण्टा पहिले
भारतमा थप ३० हजार ५४९ कोरोना सङ्क्रमित १ घण्टा पहिले
डा जागेश्वरको सरूवा भएको हो, अन्य तीनजनाको रोकियो : स्वास्थ्य मन्त्रालय २ घण्टा पहिले
आयातका लागि अनुमति पाएका तीन निजी कम्पनीले किन ल्याउन सकेनन् कोभिड खोप? ४ घण्टा पहिले
म्याद नाघेको किट अस्पतालद्वारा फिर्ता, अस्पताल भन्छ: स्वास्थ्य कार्यालयले सामान नै दिँदैन ५ घण्टा पहिले